सडकमै खाना, गाडीमा बास ! खानका लागि काम त गर्नै पर्याे नि हजूर ! - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
सडकमै खाना, गाडीमा बास ! खानका लागि काम त गर्नै पर्याे नि हजूर !
आवाज संवाददाता २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार
जेठ २२, चरिकोट । लकडाउनको समयावधि बढेसँगै मालवाहक ट्रक चालकहरु आपूmलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री तथा इन्धन साथमै बोकेर हिँड्न बाध्य भएका छन् ।
भोजनालयहरु बन्द भएको कारण खान नपाउने तथा कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण उनीहरु खाने सामान साथमै बोकेर हिँड्न बाध्य भएका हुन् ।
‘बाटोमा खाना खाने ठाउँ कहिँ छैन, खाने सामान बोकेरै हिँड्छौं भोक लागेपछि पानी भएको ठाउँमा गाडी रोकेर पकाएर खान्छौं । रातभरी गाडी चलाउँछौं ।
दिउँसो खाना खाएर ट्रकमैं सुत्छौं ।’ तामाकोशी–जिरी सडकको बुस्तीगाउँ नजिक खोल्सामा खाना बनाउने तयारी गरिरहेका ट्रक चालकहरुले भने ।
नवलपरासीबाट लिखु हाइड्रोपावरका लागि सिमेन्ट लिएर आएका अटोवेज यातायात प्रालिका ट्रक चालक प्रकाशचन्द्र बरालले आफूसहित चार–पाँचवटा ट्रकहरु साथै हिँड्ने गरेको तथा पानी भएको ठाउँमा खाना बनाएर खाने गरेको बताए ।
नवलपरासीबाट हिँडेको ५ दिनमा लिखु हाइड्रोपावरको साइटमा पुग्ने र फर्कन ३ दिन लाग्ने उनको भनाई छ । सरकारले निर्माण सामग्रीको निर्वाध आवागमन गर्न दिने भने पनि दिउँसो विभिन्न ठाउँमा अवरोध हुने भएकोले रातमा मात्र ढुवानी गरेको उनको भनाई छ ।
दोलखामा लगायत विभिन्न स्थानका आयोजनाहरुमा सामान ढुवानी गर्ने गाडी मजदुरहरुको यो साझा पीडा हो । कतिपय स्थानहरुमा प्रहरी त कतिपय स्थानहरुमा स्थानीयले दुख दिएको छ हिसाबमै नराखेको उनीहरुको भनाई छ । ‘के गर्नु, लकडाउन भनेर घरै बस्दा खान आउँदैन । काम नगरी तलब पाइँदैन ।’ पोखरा घर भएका कुमार श्रेष्ठले दुःखेसो पोखे, ‘घर बसेर भोकै पर्नु भन्दा त यहि ठिक छ । फेरि कुनै दिन त स्कुल खुल्ला नि, बालबच्चाको फि पनि त तिर्न पर्याे ।’
शहर भित्र पानी समेत नपाईएको सम्झँदै पोखरा नै घर भएका अर्का चालक प्रेम तामाङले भने, ‘काठमाडौँमा पानी पाईएन ड्युटीमा बसेका प्रहरीले कताबाट एक जार पानीको ब्यवस्था मिलाई दिए पछि बल्ल खाना पकाएर खाईयो नत्र त भोकै परिन्थ्यो ।’ खाना बनाउँदै उनले भने, ‘ट्रकमैं सेनिटाइजर राखेका छौं, मास्क लगाउँछौं, तरकारी किन्दा समेत ग्लोब लगाएर समाउँछौं । सकेसम्म ज्यानको जतन त गर्न खोजेका छौं ।’
घर नगएको महिना दिन हुन लागेको उनीहरुको भनाई छ । घर जानै पर्ने भएमा स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र जाने उनीहरुले बताए । आईपुग्न बाँकी रहेका चालकहरु तिलबहादुर र सन्तोष आई पुगेपछि खाना खाने उनीहरुले बताए । कोरोना कहर सँगै भोकमरीको कहरमा परिने डरले आफूहरु जोखिम मोलेर भएपनि काममा लागिरहेको उनीहरुको भनाई छ । निर्वाध रुपमा दिउँसो नैं निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न दिए आफूहरुलाई सहज हुने उनीहरुले बताए ।